MX Linux: အံ့အားသင့်စရာများနှင့်အတူ DistroWatch အဆင့်ကိုဆက်လက် ဦး ဆောင်နေသည် Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်ကိုယနေ့တစ် ဦး ထံအပ်နှံသည် GNU / Linux Distroအများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်၊ များစွာသောအရာတို့တွင်၎င်းသည်ယခင်ထုတ်ဝေမှုများတွင်မီးမောင်းထိုးပြထားပြီးဖြစ်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများ (လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ) ကိုပေးထားသည်။ ဤရွေ့ကား၊ MX Linux.
ဟုတ်ကဲ့, လူသိများနှင့်သွားရောက်ခဲ့ပြီးသည်နှင့်အညီအတူတူပင် ကမ္ဘာတွင်အဆင့် de Linux / BSD Distros ကိုခေါ် DistroWatch, ၌ကျန်ကြွင်း ပဌမ, 2019 ကာလအတွင်းနှင့်ယခုအချိန်အထိ 2020 ခုနှစ်။
ကကိုယ်စားပြုသောအရာကိုအတွက်လျော့နည်းအသိပညာများအတွက် DistroWatch သို့မဟုတ်၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကိုးကားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။
"ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဤ site သည်အခြား open source operating systems များကိုတစ်ခါတစ်ရံဆွေးနွေးကြသော်လည်း Linux ကိုဖြန့်ချိခြင်းနှင့် BSD ၏အရသာကိုအထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်သည်။ Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများရှိပြီးဤ site သည်ရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုတသမတ်တည်းစုဆောင်းရန်နှင့်တင်ပြရန်ကြိုးစားသည်။".
နှင့်သင်၏ လူကြိုက်အများဆုံး Linux / BSD Distros အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအောက်ပါအချက်တွေကိုအလေးထားသင့်တယ် -
"DistroWatch ၏စာမျက်နှာအလည်အပတ်ခရီးစာရင်းအချက်အလက်များသည်ဤဝဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများအကြား Linux ဖြန့်ချိမှုနှင့်အခြားအခမဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်များ၏လူကြိုက်များမှုကိုတိုင်းတာရန်ပေါ့ပါးသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဖြန့်ဝေမှု၏စျေးကွက်ဝေစုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ နေ့တိုင်း DistroWatch.com တွင်ဖြန့်ဖြူးသောစာမျက်နှာသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုသာဖော်ပြသည်".
1 MX Linux - မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်
1.1 MX Linux ဆိုတာဘာလဲ။
MX Linux - တစ်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်
MX Linux ဆိုတာဘာလဲ။
အစမှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါတို့ကအခြားအချိန်တွေမှာလည်းငါတို့ပြောခဲ့တယ် MX Linux, ဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အလမ်းနှင့်မသိရသောသူတို့အဘို့သာကျနော်တို့က၎င်း၏ပေးထားဖော်ပြချက်ကိုးကားပါလိမ့်မယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထို့နောက်သူတို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။
"MX Linux သည် antiX နှင့် MX Linux အသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်မှုစနစ်၏မိသားစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြော့ရှင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကွန်ပျူတာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ MX ၏ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများသည်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုပြီးမြောက်စေရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ antiX ၏အစဉ်အလာလျှပ်တစ်ပြက်နှင့် Live USB ကိရိယာများသည်အထင်ကြီးလောက်သောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစွမ်းရည်များထည့်သွင်းထားသည်။ ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဖိုရမ်များမှတဆင့်ကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့များရှိသည်".
အမှု၌, သင်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ချင်တယ် MX Linuxကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှု၏နောက်ဆုံး ၂ ကိုကြည့်ရှုရန်ဤစာအုပ်ပြီးသွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ယခင်ထုတ်ဝေ အဲ့ဒီအကြောင်း။
ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ DistroWatch ရှိ MX Linux သင်အောက်ပါကိုနှိပ်ပါ link ကို.
အဆိုပါအညီ MX Linux တရားဝင်ဘလော့ဂ်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်တွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသင့်တော်ဆုံးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ISO MX 19.2 Base Edition ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Respin ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်: MX ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးပါ ၀ င်သော်လည်းအနိမ့်ဆုံး application များပါ ၀ င်သော ISO ဆိုသည်မှာ Desktop မရှိဘဲထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ application များ၊ ဂိမ်းများနှင့်အခြားပေါင်းစပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် MX Linux system ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးပါ ၀ င်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ISO ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန် (ပုံမှန်) က ISO မှာ။
MX-Fluxbox အတွက်ရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်ပေးပါဖြေ - WM FluxBox မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ mxfb-goodies လို့ခေါ်တဲ့အထုပ်အသစ်ကိုထုတ်ဝေလိုက်ပြီ။ ၄ င်းတွင်အောက်ပါအမည်များအောက်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ် ၄ ခုပါဝင်သည်။ mxfb-tiles, mxfb-shape, mxfb-Recent-files mxfb-independent-နောက်ခံ။
ISO MX Workbench 2020 စတင်ခြင်း: ဆွစ်ဒင်များအတွက်ဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်ဓားပုံစံကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော ISO ဓလေ့တစ်ခုတွင်၎င်းတွင် disk များနှင့်အခန်းကန့်များကိုပွားရန်၊ ဖိုင်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် rootkits များကိုရှာဖွေရန်၊ , များစွာသောအခြားအကြား, ဖျက်မောင်းနှင်ပါ။
MX-Fluxbox 2.2 အသစ်ပြောင်းခြင်းဖြေ - အခြားအရာတွေထဲကတစ်ခုအပါအ ၀ င် MX Linux မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ WM FluxBox အတွက် update အသစ် အသစ် toolbar နှင့် launcher applications များနှင့်အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်၏အသုံးပြုသူများအဘို့အပျြောအပါးများနှင့်အဆင်ပြေစေရန်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်သိသိသာသာတိုးမြှင့်, မိတ်ဆက်။
ISO MX-19.2 KDE ၏ထုတ်ပြန်မှုဖြေ - KDE Plasma Desktop Environment ပါ ၀ င်တဲ့ MX Linux Advanced Hardware Support / AHS format အောက်မှာ enable လုပ်ထားတဲ့ 64-bit ဗားရှင်းတခုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ISO တခုဖြစ်တယ်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း MX Linux တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux Distro အသုံးပြုသူများပေးထားသောအနေအထားဝင်ငွေကထိုက်တန်သောဖြစ်သောစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက် DistroWatch.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အဆိုပါ Distro အကြောင်း «MX Linux»နှင့်၎င်း၏လတ်တလော သတင်း (ကြေငြာချက်များ)ရှည်လျားသောခေါ်လူသိများဝဘ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည်သော «DistroWatch»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » MX Linux: DistroWatch အဆင့်ကိုအံ့သြစရာများများနှင့်ဆက်လက် ဦး ဆောင်နေသည်
Krita 4.4.0 သည်ဤနေရာတွင်ရှိပြီးဤသည်မှာ၎င်း၏အေရးပါဆုံးသတင်းဖြစ်သည်